#Mareykanka oo sheegay in xubno ka tirsan Al shabaab uu ku dilay Duqeyn Diyaaradeed | Get Latest News From Horn of Africa
#Mareykanka oo sheegay in xubno ka tirsan Al shabaab uu ku dilay Duqeyn Diyaaradeed
By Wanaag On Jan 10, 2019
War qoraal ah oo kasoo baxaya Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Africa ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in 6 xubnood oo ka tirsan Alshabaab ay ku dileen Duqyen diyaaradeed oo 8-dii bishan ka dhacday Deegaanka Yaaq Baraawe oo ka tirsan Gobalka Baay.
Warka kazoo baxay Taliska Ciiddanka Maraykanka ka jooga Qaaradda Africa ee AFRICOM ayaa lagu xusay in duqeyntaasi ay ku burburiyeen Gaari Tekniko ah oo ay la socdeen 6 ka tirsan Alshabaab.
Duqeynta ayaa waxa uu sheegay Taliska Mareykanka ee Afrika in aysan wax khasaare ah kazoo gaarin dad rayid ah, islamarkaana ay si taxadar leh u fuliyeen.
Taliska AFRICOM waxay kaloo sheegeen inay garab taagan yihiin DFS iyo Saaxiibadda Caalamiga si looga hortago weeraradda Alshabaab, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, Taliska Milliteriga Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika waxay qoraalkooda ku sheegeen inay sii wadi doonaan inay kala shaqeeyaan Saaxiibadooda sidii ay Ciiddanka AMISOM ugu wareejin lahaayeen DF S iyo Dowlad-gobaleedyadda mas’uuliyadda Ammaanka ee xilliga dheer ee dalka Somalia.
Ugu dambeyn, AFRICOM waxay sheegtay in Ciiddanak Maraykanka loo isticmaali doono dhamaan qaababka laga taxadiray ee lagu badbaadin karo Ummadda Soomaaliyeed, oo ay ku jiraan Ciiddamadda kale ee ay shaqo wadaagta yihiin, AMISOM, DFS iyo Ciiddanka Ammaanka Qaranka Somalia ee S.N.A.